U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Jörg izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ikhaya leholide elihle eliseduze nemvelo ukuze uphumule, uphumule futhi uzizwe ulungile. I-Branäs ne-Hovfjället izindawo zokushushuluza zingafinyelelwa kalula ukusuka lapha ngemidlalo yasebusika (cishe imizuzu engama-30). Ehlobo le ndawo ihlinzeka ngemisebenzi eminingi yezemidlalo yamanzi e-Klarälven, ukuvakashela ibhere ne-elk park, ukuhamba ngezinyawo, i-moose kanye ne-beaver safari nokunye okuningi ...
Le ndlu yaseSweden isendaweni eseceleni emaphethelweni ethambekeni lapho ubuka khona iKlarälvental. Ingafinyelelwa ngomgwaqo omncane oyinyoka osulwa ebusika. Amaketanga adonsa ngawo wonke amasondo noma eqhwa asuke eseyinzuzo. Njengenye indawo yendawo yokupaka ngqo endlini, kunendawo yokupaka eyi-200m ukusuka endlini phansi eDorfstrasse futhi indlela eya phezulu ingahanjwa. Kukhona isitofu egumbini lokuphumula esinikeza imfudumalo ethokomele. Kukhona ne-TV yesathelayithi yaseJalimane. Ikhishi elibanzi elinesitofu salo esengeziwe likumema ukuthi uchithe amahora amaningi athokomele. Ihlathi elikhulu kanye nemvelo yemvelo ehlangene nendawo.
4.73(54 okushiwo abanye)
4.73 out of 5 stars from 54 reviews
4.73 · 54 okushiwo abanye
Indawo yemvelo emangalisayo yaseSweden enamajikijolo ayo, amakhowe nezilwane zasendle iyingqayizivele! Ihlathi eliseduze nendlu likumema ukuba ukhethe amakhowe namajikijolo. Uma unenhlanhla uyakwazi ukubona i-moose ngezikhathi ezithile ngemva kwendlu.
Ngingatholakala kalula ngocingo ngesikhathi ngihlala. Kukhona umphathi wendawo esizeni wezimo eziphuthumayo.
UJörg Ungumbungazi ovelele